Ziziphi iimpawu abantu abakhethayo kwintombi?
Nawuphi na umfazi ufuna ukwazi ukuba yiziphi iimpawu umntu azikhethayo kumfazi. Wonke umntu unelungelo lakhe lomfazi. Kodwa zikhona iimpawu ezithile kwintombazana eninzi amadoda ayithandayo. Ngoko, makhe sijonge kuzo zonke iimpawu zowesifazane abesilisa bethu bathanda kakhulu.
Umgangatho wokuqala kumfazi abakhethwa ngumntu ngumbala weenwele.
Abasetyhini abaninzi bacinga ukuba amadoda afana ne-blondes kakhulu, kodwa oku akunjalo nhlobo. Umbala wemisonyo wabantu akuyona into ebalulekileyo ekuqaliseni umfazi. Amadoda achaza ngokucacileyo ezinye iimpawu ezibalulekileyo kumfazi.
Umgangatho wesibini kwindoda ekhethwa ngabantu ngokubonakala.
Ukubonakala komfazi kubambe indima enkulu. Amadoda ayasixabisa ngamehlo ethu. Indlela esijonge ngayo kubaluleke kakhulu kwaye ayiyinkalo yezinto ezithile. Emva koko, sonke siyazi ukuba abafazi ababi abakho kwihlabathi.
Umgangatho wesithathu kwintokazi abakhethiweyo amadoda ngumqondo wesitayela.
Amadoda awayithandi abafazi abangazinzileyo. Kwabo akukhathazeki ukuba iingubo zixabisa kakhulu okanye zibaleka. Into ephambili kukuba iingubo zidibene kwaye zihambelana ngentsingiselo. Izambatho zowesifazane kufuneka zilungele ngokufanelekileyo isitala kunye nokubonakala kwayo.
Umgangatho wesine kwindoda ekhethwa ngumntu yiphunga.
Kubaluleke kakhulu kumadoda yindlela umfazi ocola ngayo. Amadoda ayithandi xa ibhinqa liphosa. Kodwa nabo abayithandiyo, xa amanzi angasese aphethe iphunga elibukhali, bakhetha ukuvumba okomnandi, ukhanyisa njengowesifazane.
Umgangatho wesihlanu kwindoda ekhethwa ngabantu kukuba ukwaneliseka nokwaneliseka.
Ukuba ufuna ukukholisa abantu, i-aura yempumelelo kufuneka ivela kuwe. Amadoda ayithandi xa ibhinqa lihlala licaza ngeengxaki zabo okanye lizama ukubahawukela. Amadoda athanda umfazi othe tye, kwaye ukuba, ngaphandle kwesimo esifanelekileyo, umfazi uncumo olukhangayo, ngoko oku kukhangela ngakumbi.
Umgangatho wesithandathu kwindoda ekhethwa ngumntu yinto yakhe.
Into ebalulekileyo kwibhinqa yiyona nto inokuqonda. Kumele kuhluke kwabanye besetyhini kwaye kungavamile.
Umgangatho wesixhenxe kwindoda ekhethwa ngabantu ukuba iimpawu zowesifazane.
Amadoda ayithandi abafazi nabasetyhini abanqwenela ukuthetha kakubi ngeenxa zonke. Kwakhona, umfazi makangafungeli aze athethe ngelizwi elibukhali nelizwi.
Ukuze ukholise abantu, kufuneka ube nobulumko, ububele kunye nobungane. Kumele ukwazi ukugcina intetho. Kwakhona abantu abayithandi abafazi abaziimfama.
Umgangatho wesibhozo kumfazi okhethwa ngumntu ngumfanekiso.
Amadoda athetha abafazi abangenayo ubunzima obukhulu okanye ukungabi nantoni. Amadoda ayakuthanda ukubona xa ibhinqa likhathalela umfuziselo wakhe.
Umgangatho wesithoba kwisibini apho amadoda akhethileyo yinto yokwenza.
Amadoda ayithandi xa ibhinqa linomlinganiselo omkhulu wokwenza. Ukwenza kufuneka kube ngobuncinane ubuncinane.
Umgangatho weshumi kwintokazi abakhethiweyo amadoda kukuqonda.
Amadoda athande kumfazi oqondayo kunye nomonde ngenxa yokuzilibazisa. Kwakhona, amadoda afana nomnene, onenkathalo yabasetyhini abanokuhlala bebalwe kwiimeko zobomi ezinzima. Ungathandi kwaye uphazamise abantu, abafazi abazingca. Ibhinqa kufuneka libe neengqondo zokuzixabisa, kwaye ngokufanayo maxa wambi kungeke kube lula. Ibhinqa kufuneka libe neyantlukwano, akufanele kube nzima kumntu.
Thetha malunga nazo zonke iimpawu zowesifazane onokude kakhulu. Ngokuqinisekileyo, kunzima ukulungeleka, kodwa unokuhlala uzama ukwenza ngcono.
Ngoku, bafazi abathandekayo, niyazi ukuba ziphi iimpawu kumfazi wethu amadoda akhethiweyo.
Yintoni enokuyenza kumfana ongashiyanga?
Ukwazi unyaka omtsha
Indlela yokuvuma uthando oluthethwa ngumntu?
Indlela yokumodareyitha ukutya
Zininzi iindlela zokuvuma uthando lwakho
Ukupheka, zokupheka - inyama yenkomo
Indlela yokwenza ifestile ngevolon
Iingxaki zokukhulisa umntwana kwintsapho engaphelelanga
Iindlela ezilungileyo zokuhlambulula indlu
Ukunyangwa kwezifo eziphefumulayo zokuphefumula ekhaya
Indlu e-Le Corbusier